Awaamiirta cusub ee COVID-19 ee Garoonka Caalamiga ah ee Entebbe Uganda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » Awaamiirta cusub ee COVID-19 ee Garoonka Caalamiga ah ee Entebbe Uganda
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Uganda War Deg Deg Ah
Lounge International Entebbe
Kadib furitaanka shaybaadhka shaybaadhka COVID-19 ee Madaarka Caalamiga ah ee Entebbe oo uu furay Madaxweyne YK Museveni Oktoobar 22, 2021, Dawladda Jamhuuriyadda Uganda waxay soo saartay awaamiir dhaqan-gal ah Oktoobar 27, 2021, illaa ogeysiis dheeri ah oo ku saabsan tallaabooyinka caafimaadka ee COVID-19 Madaarka Caalamiga ah ee Entebbe.
Rakaabka imanaya Entebbe International waxa laga qaadi doonaa baadhis COVID-19 iyada oo aan loo eegin meesha ay ka yimaadeen iyo heerka tallaalka.
Rakaabka laga helay cudurka waxaa loo wareejin doonaa xarumaha daawaynta.
Dadka safarka ah ee qaatay tallaalka COVID-19 oo haysta shahaado waa inay wali keenaan shahaado aan wanaagsanayn oo COVID-19 PCR oo la qaatay 72 saacadood gudahooda markay fuuleen.
The awaamiirta dhaqan galeysa Oktoobar 27, 2021, ilaa ogeysiis dheeraad ah lagu soo saaray ogaysiis Hay'adda Duulista Rayidka ee Uganda, Adeegga Macluumaadka Hawada sida soo socota:
1. Dhammaan rakaabka imanaya Madaarka Caalamiga ah ee Entebbe waxaa la marsiin doonaa baaritaanka COVID-19, iyadoon loo eegayn waddanka uu ka yimid ama heerka tallaalka.
2. Ka-dhaafitaannada kaliya waa:
3. Rakaabka laga helo COVID-19 marka ay yimaadaan waxaa la siin doonaa taageero nafsi ah waxaana loo wareejin doonaa xarumaha daawaynta ee dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay halkaas oo lagu maareyn doono todobo maalmood lagana saari doono baaritaanka PCR ee taban.
4. Daawaynta rakaabka (3) ee sare waxay noqon doontaa bilaash isbitaalada dadweynaha. Si kastaba ha ahaatee, rakaabka doorta cosbitaalada gaarka ah waxay dabooli doonaan kharashkooda.
5. Dalxiisayaasha imanaya, haddii ay asymptomatic yihiin ama ay qabaan cudurro fudud, waxaa lagu maamuli doonaa hoteellada dalxiiska ee loogu talagalay.
6. Dalxiisayaasha ku jira (5) ee kor ku xusan ee u gudba cudurro daran waxaa loo wareejin doonaa isbitaallada ay rabaan.
7. Rakaabka imanaya waxay ku bixinayaan US$30 ama wax u dhigma Shilinka Uganda ee baaritaanka COVID-19 PCR.
8. Lacag-bixinta (7) ee sare waxa lagu samayn karaa onlayn ama marka la yimaado iyadoo la isticmaalayo goobta mishiinada iibka, lacagta mobaylka, ama lacag caddaan ah.
9. Dhammaan dadka socotada ah ee heerkulku jidhkoodu AAN ka sarrayn 37.5°C (99.5°F), aan qabin qufac joogto ah, neefsashada oo ku adkaata, ama calaamado kale oo hargab u eg waa in loo ogolaadaa inay galaan ama ka baxaan Uganda.
10. Caafimaadka Dekadda Caalamiga ah ee Entebbe waa in ay ogolaato imaatinka ama ka bixida shahaado tijaabo ah oo COVID-19 PCR taban oo la sameeyay 72 saacadood gudahooda laga bilaabo wakhtiga muunada la qaaday. Tani waxay meesha ka saaraysaa wakhtiga gaadiidka ee dhismaha terminalka.
11. Dadka safarka ah ee qaatay tallaalka COVID-19 ee haysta shahaado waa in ay weli keenaan shahaado aan wanaagsanayn oo COVID-19 PCR oo laga qaatay 72 saacadood gudahood laga bilaabo wakhtiga muunad ururinta ilaa diyaarad la raacayo. Tani waa sababta oo ah tallaalku 100% difaac ma aha, sidoo kale waxay qaadataa dhowr maalmood/toddobaadyo si loo bilaabo ilaalinta.
12. Rakaabka ka dhoofaya dalka waxa looga baahan yahay inay haystaan ​​shahaado tijaabo ah oo COVID-19 PCR oo xun 72 saacadood gudahooda laga bilaabo wakhtiga muunada la qaadayo. Waxay u hoggaansami doonaan shuruudaha safarka caafimaad ee waddanka ay u socdaan.
13. Rakaabka imaanaya xilliga bandowga, iyo/ama ka imaanaya degmooyinka Kampala ka baxsan ee wata tigidh diyaaradeed iyo warqad-raacid waa in loo oggolaadaa inay u sii gudbaan hoteeladooda iyo/ama hoygooda.
14. Rakaabka ka dhoofaya xilliga bandowga, iyo/ama ka imaanaya degmooyinka Kampala ka baxsan ee wata tigidh diyaaradeed oo sax ah waa in loo oggolaadaa inay u sii gudbaan garoonka ay ku socdaan iyadoo la horgeyn doono tigidhka rakaabka ee maamulka si ay u caddeeyaan inay aadaan garoonka.
15. Darawaliintu waa in ay hayaan caddaymo muujinaya in ay ka yimaadeen garoonka (sida tigidhka baarkinka garoonka ama tigidhka rakaabka) si ay rakaab uga dejiyaan ama uga soo qaadaan.
16. Gaadiidka hawada ee hadhaaga dadka waa la ogolyahay in dalka la geeyo hadii la buuxiyo shuruudahan soo socda.
– Shahaadada caafimaadka ee sababta dhimashada.
– Nuqulka baasaboorka/dokumentiga aqoonsiga qofka dhintay (Baasaboorkii asalka ahaa/dokumentiga safarka/dhokumentiga aqoonsiga ee la horgeynayo hay’adaha socdaalka) v. Ruqsadda soo dejinta/ oggolaanshaha soo dejinta ee Agaasimaha Guud ee Adeegyada Caafimaadka.
17. Si dalka loo keeno hadhaaga dadka waa in laga qaadaa wasaaradaha caafimaadka iyo arrimaha dibadda.
Dalxiisayaasha si degdeg ah ayaa loola socday
Mudnaanta ayaa loo sameeyay in si degdeg ah loo daba galo dalxiisayaasha sida soo socota:
Marka ay yimaadaan, dalxiisayaasha waxaa la geyn doonaa goobta swabbing ee dalxiiska halkaas oo muunado laga qaadi doono si loogu tijaabiyo.
Ka dib waxay u sii gudbi doonaan xaqiijinta Qolka Dalxiiska oo ay AUTO (Ururka Dalxiiska Dalxiiska Uganda) iyo wakiillada UTB (Uganda Tourism Board) ay iman doonaan, waxaana loo oggolaan doonaa inay u sii gudbaan hoteellada ay doortaan ee Entebbe ku dhex yaal.
Natiijooyinkooda waxaa lagu soo diri doonaa boostada ama WhatsApp, iyadoo ku xiran waxa ku habboon, 2 1/2 saacadood gudahood.
Dalxiisayaasha taraafikada ah waa inay ku sugaan gegida natiijadooda, ugu badnaan 1 1/2 saacadood.
Dalxiisayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa buuga imtixaankooda halkan.